Anne Rice: biography uye mabhuku ake epamusoro | News Literature
Anne Rice: Biography uye mabhuku ake zvakanakisisa
Encarni Arcoya | | Updated on 12/12/2021 22:51 | Vanyori
Kwaibva: La Razón
Zvita 11 kwaedza nerabhoni dema munyika yezvinyorwa. Uye ndezvekuti mumwe wevanyori vanozivikanwa pasi rese, Anne Rice akafa nekuda kwesitiroko. Mwana wake chaiye ndiye akaburitsa mashoko anosuwisa:
"Zvinorwadza moyo wangu kukuzivisai kuti mambakwedza ano Anne ashaya nekuda kwekunetsekana nesitiroko," mwanakomana wake Christopher akatsanangura pasocial media. Akanga ava nemakore makumi masere. Munyori achavigwa mumhuri mausoleum kuMetairie Cemetery muNew Orleans mumutambo wakavanzika. Pachava naLestat, naLouis, naPandora, uye, senguva dzose, Stan akanyora kuti: «Isa muromo wako pane wangu. Zvisiye kumheni nokutsva, nokuti kutya zviratidzo zvezvinoitika kana munhu afa.
1 Anne Rice, mambokadzi wevampires
1.1 Chiso chake semunyori
2 Mabhuku akanakisa aAnne Rice
2.1 Kubvunzana nevampire
2.2 Amai kana Ramses vakatukwa
2.3 Tetralogy yeKurara Runako
Anne Rice, mambokadzi wevampires
Anne Rice mufananidzo sosi: elperiodico
Waiziva here kuti Anne Rice rakanga risiri zita rake chairo? Akazvarwa muNew Orleans muna 1941 uye zita rake ainzi Howard Allen O'Brien. Zvisinei, kubvira achiri mudiki aida kunzi Anne. Aivawo nerudo rwechokwadi uye chido chevampires nevaroyi.
Nezve hupenyu hwake hwega hapana zvakawanda zvinozivikanwa kupfuura izvozvo Muna 1961, pazera remakore makumi maviri, akaroora mudetembi uye munyori wemifananidzo Stan Rice Waaive naye makore makumi mana nerimwe, kusvika afa musi waZvita 41, 11 (hongu, zuva rimwechete nemwedzi wakafa Anne Rice).
Somugumisiro wewanano, vana vaviri vakazvarwa, Michelle, uyo zvinosuruvarisa kuti akafa pazera remakore mashanu nekuda kweleukemia; uye Christopher Rice, uyo akatevera tsoka dzaamai vake uye anga ari iye akataura nezverufu rwavo.
Chiso chake semunyori
Padanho rekunyora, Anne Rice haana kunyora mabhuku ake chete pasi peiyi "pseudonym", asi mamwe akawanda anozivikanwa saAnne Rampling kana AN Roquelaure (iyi yakanangana nemadingindira evakuru).
Bhuku rekutanga rakaita kuti munyori abudirire raiva Kubvunzana nevampire, rakanyorwa muna 1973, kunyange zvazvo rakabudiswa makore matatu gare gare, muna 1976. Ikoko ndiko kwaiva kubudirira zvokuti vakaguma vabudisa firimu raibva mubhuku raiita kuti vampire vave mufashoni. Iri raive bhuku rekutanga mune saga, The Vampire Chronicles, uye matatu ekutanga akagadziridzwa, kunyangwe paine mukaha wenguva yakakura pakati pekutanga nekupedzisira.
Iri bhuku rekutanga, uye nevazhinji vavakaona gare gare, sezvo zvichinzi akanyora anopfuura makumi matatu enganonyorwa uye sezvo nyaya zhinji nemabhuku ane mamwe mazita emanyepo haana kuenda asina kucherechedzwa. Muchokwadi, zvinonzi vateveri vazhinji vakadzika musasa kunze kwemba yake kuti vamuone uye / kana kutaura naye kana abuda, kunyanya paakaenda kumisa.
Ichokwadi kuti, mumakore achangopfuura, haana kunyora zvakawanda, kana kuti hapana zvakawanda zvataurwa pamusoro pake, mukuwedzera pakuti pane zvishoma zvaakasangana nazvo maererano neongororo dzakaipa umo mashoko aakashandisa uye mataurirwo aakaitwa. vaverengi vake vakanga vasiri ivo vakanyanya kubudirira.
Asi chokwadi ndechekuti tarenda raaive naro harina kupokana, kwete kungotaura nyaya uko vampires vaive protagonists emapeji uye zvirongwa, asi aigona zvakare kuita zvakafanana nevamwe vazhinji mavara.
Mabhuku akanakisa aAnne Rice
Kunyangwe iwe waiziva Anne Rice kare, kana ichangobva kuwana munyori, hapana mubvunzo kuti, Pakati pemabhuku ake akawanda, pane mamwe atinofanira kuratidza kubudirira kwavakaita munguva yavo pavakabuda sekutaura kwakanaka kwazvo kubva kuvaverengi. Mushure mezvose, ndivo vakaita kuti Anne Rice ave munyori anonyanya kuzivikanwa pamusoro penyaya yeparanormal.
Unoda kuziva kuti mabhuku iwayo chii?
Hurukuro nevampire ...
Tinotanga neKubvunzurudza nevampire, yekutanga yesaga Iyo Vampire Diaries,nekuti panguva yayakabuda yainge yabhowa. Kusvika padanho re ita kuti vampires ave fashoni panguva iyoyo, uye zvakare apo firimu yakabuda.
Mariri tinowana vampire anosarudza kupa kubvunzurudza kune mutori wenhau kwaanoda kutaura hupenyu hwake hwose, kubva asati ava vampire kusvika panguva iyo paaitaura nyaya yake.
Amai kana Ramses vakatukwa
Mummy (kana Ramses the ...
Iri bhuku nderimwe umo ma "vampires" asingaratidzike uye zvinogona kukuvhundutsa zvishoma kana zvichienzaniswa nezvinoshandiswa naAnne Rice kwatiri. Asi chokwadi ndechokuti nderimwe revanyori vakanakisisa, zvokuti, kana wangosvika pachikamu chakati, haugoni kurega kuverenga bhuku racho kusvikira rapera.
Mune ino kesi, Kunyange zvazvo bhuku racho richiita serinotaura nezveEgypt yekare, chokwadi ndechokuti chirongwa chacho hachiitike ikoko, asi muLondon uye pakati pezana remakore rechiXNUMX.. Imwe yemanovhero erudo ane hurongwa hwepakutanga zvekuti haufanirwe kukanganwa nezvayo.
Tetralogy yeKurara Runako
Panyaya iyi, hauzokwanisi kuwana mabhuku aya nemazita awo, asi nemazita emanyepo, AN Roquelaure. Inosanganisira: Kupambwa kweKurara Kunaka; Chirango chekurara Kunaka; Kuburitswa kweSleeping Beauty; uye Humambo hweKurara Kunaka.
Ndicho erotic tetralogy, nokudaro haana kuribudisa nezita rake renguva dzose. Asi yakanyatsorondedzerwa uye kuudzwa kuti inokuchengeta iwe usingafungi uye ndiyo imwe yeakanakisa novhero yainayo.
Kutatarika BDSM uye bonde reruchiva, munyori akagadzira kuenderera kwenyaya yevana. Chete, mune iyi kesi, haina chekuita nazvo.
Iri nderimwe remanovhero ega ega ayo, seyakapfuura, yaakaburitsa pasi peimwe pseudonym. Uye mune ino iwe unogona kuona imwe "chikamu" chemunyori, kwaanotaurira nyaya apo bonde raive rakashata uye vatambi vanopindwa muropa zvakanyanya.
Inyaya ya mufananidzo wevana uye mukadzi wechidiki, achiri kuyaruka, izvo zvinopedzisira zvabata mwoyo wekutanga. Kusvika pakuti hukama hwavanotanga kuita husina kujairika zvekuti hunodarika miganhu.
Uye kune akawanda mamwe mabhuku naAnne Rice, asi uyu mutero wedu mudiki. Ndedzipi dzaungakurudzira? Ndedzipi dzakakumaka?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Anne Rice: Biography uye mabhuku ake zvakanakisisa
María Jesús Romero kubva kuna Ávila Lara. Hurukuro
Julio Cortázar: nhetembo